true suppression /zu-ZA/tools-for-life/suppression/steps/the-antisocial-personality.html read 6 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/suppression_zu_ZA.jpg Imbangela Yokucindezeleka
Umuntu Onobuntu ngokwemvelo usebenzela ekwenzeni okuhle kakhulu.
Akakhathazwa yizitha azicabangayo, kepha uyaziqaphela izitha zangempela lapho zikhona.
Umuntu Onobuntu ufuna ukuphumelela futhi ufuna nabanye baphumelele, kanti Umuntu Ongenabo Ubuntu ngempela futhi ngasese ufuna abanye bahluleke.
Ngokuyisisekelo, Umuntu Onobuntu ufuna abanye bajabule futhi benze kahle, kanti Umuntu Ongenabo Ubuntu uhlakaniphile kakhulu ekwenzeni abanye benze kabi kakhulu.
Iphuzu elibalulekile mayelana noMuntu Onobuntu akusiyona ngempela impumelelo yezinto azenzayo, kepha izizathu zakhe zokwenza izinto. Umuntu Onobuntu, lapho ephumelele, uvame ukuhlaselwa Umuntu Ongenabo Ubuntu futhi, ngalesi sizathu, angahluleka. Kepha Umuntu Onobuntu ufuna ukuba abanye baphumelele futhi, kuyilapho Umuntu Ongenabo Ubuntuufuna abanye bahluleke.
Ngaphandle kokuthi simbone Umuntu Onobuntu futhi simvikele sibone futhi Umuntu Ongenabo Ubuntu futhi simvimbele ekulimazeni abanye, umphakathi wethu uzoqhubeka nokuhlupheka nokusangana, nobugebengu kanye nempi, futhi uMuntu nentuthuko ngeke baphumelele.
Musa ukulimaza Umuntu Onobuntu—futhi ungahluleki ukwenza Abantu Abangenabo Ubuntu bangabi namandla emizamweni yabo yokulimaza thina sonke.
Ukuthi umuntu wenyukela ngaphezulu kwabangane bakhe noma athathe umsebenzi obalulekile akumenzi abe Umuntu Ongenabo Ubuntu. Ngokunjalo, ngenxa yokuthi umuntu angakwazi ukulawula noma ukuba negunya phezu kwabanye akumenzi Umuntu Ongenabo Ubuntu.
Yizizathu zakhe zokwenza lokho nokuthi kwenzekani njengomphumela wezenzo zakhe ezihlukanisa noMuntu Ongenabo Ubuntu noMuntu Onobuntu.
Ngaphandle kokuthi siqaphele futhi sisebenzise izimpawu zangempela zalezi zinhlobo ezimbili zabuntu, sizoqhubeka nokuphila ngokungaqiniseki ukuthi zingobani izitha zethu futhi, ngokwenza njalo, siphathe abangane bethu ngokungafanele.
Bonke abantu benze izenzo zodlame noma ukuyekelela (ukunganaki) abangasolwa ngakho. Kubo bonke abantu, akekho noyedwa umuntu ongena sici.
Kepha kukhona labo abazama ukwenza okulungile nalabo abasebenza ngokungalungi ngalawa maqiniso nezici ungabazi.